नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। कसैको विवाहमा जाँदा खाना मन परेन् भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? खाना कम खानुहुन्छ वा अर्को खाना मगाउनुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईं खाना नै नखाएर फर्किन पनि सक्नुहुन्छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
तर भारतको बिहार राज्यमा अचम्मको घटना भएको छ । कुखुराको मासुसँग लिट्टी नदिएको आरोपमा बिहारको गोपालगञ्ज जिल्लाको उचाकागाउँ थाना क्षेत्रको नरकटियामा लडाँई भएको छ ।
उक्त लडाँईमा एक जनाको मृत्यु पनि भयो । घटनाको सम्बधमा प्राप्त जानकारी अनुसार राजेन्द्र सिंहको छिमेकमा जन्ती आएको थियो । जन्तीमा कुखुराको मासुसँग लिट्टी नदिएको भन्दै विवाद सुरु भयो ।
त्यहाँ विवाद एकदम उग्र भएको थियो । घटनामा राजेन्द्र सिंहलगायत चार जनालाई क’टट्टा प्र’योग ग’रियो । चारैजनालाई उपचारको लागि गोपालगञ्ज सदर अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँका डाक्टरहरूले राजेन्द्र सिंहलाई मृ त घोषित गर्दिए । तीन जना गम्भीर घाइतेहरुलाई अर्को अस्पताल पठाइयो
जानकारी अनुसार तीन जना राहुल कुमार सिंह, रिशु कुमार सिंह र रोहित कुमार सिंह गम्भीर घाइते भएका छन् । शुरुमा उनीहरुलाई उपचारका लागि गोपालगञ्ज सदर अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा भर्ना गरियोे । त्यहाँ चिकित्सकहरूले प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि गोरखपुर रिफर गरेका छन् । त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूले तीन जना घाइतेलाई गोपालगञ्ज अस्पतालबाट उपचारका लागि गोरखपुर पुर्याएका हुन् ।एजेन्सी
सवारीसाधन भित्रिने क्रम बढ्दो, रसुवागढीबाट
यति ध्यान नदिए बम जस्तै पड्किन सक्छ प्रेसर कुकरमा, जोगिनु पर्छ
प्लेन भित्र के घटना भयो कि एयेरलाइन्सले ९४ लाख यात्रुलाई दिनु पर्यो ?
किन ब’न्द हुन्छ सुपा देउरालीमा पुगेपछि गाडीको स्टा’र्ट…